Entprima Egwu na More - Ahụmịhe zuru oke
Akwụkwọ abụ Horst Grabosch
Ndepụta egwu Serenity
Ihe edeturu ntọhapụ
Social Media Ozi
Nlekota Ntanetị .wa
Site na Ape rue mmadu
Weebụsaịtị gọọmentị nke akara ndekọ Entprima Mbipụta - LC-29932
Entprima na-ahụ onwe ya dị ka onye nnọchianya nke mmụọ dị elu na-emechighị anya ya na nhụjuanya nke ụwa n'ezie. Omume nguzozi nke nwere ike ịga nke ọma na nguzozi ziri ezi n'etiti oke. Dị ka a music ika, music bụ n'ezie nakwa anyị Central nchegbu. Otú o sina dị, anyị na-anọgide na-elepụ anya maka ihe ndị pụrụ ịkwado ebumnuche anyị.
Ọkụ dị nro
Moritz Grabosch na Horst Grabosch
Pụọ ugbu a
Ụlọ ezumike Chillout site Entprima Na-ebi akwụkwọ. Mmekọrịta Moritz Grabosch na Horst Grabosch. Abụ 12 na njem na ọnọdụ mmetụta uche na isiokwu isiokwu: "Nye m ọtụtụ oge ndị ahụ dị mma". Usoro a enweelarị ihe dị ka 100k spins na Spotify. Ụwa anyị na-adị omimi mgbe ụfọdụ. Enwere ala ndị yiri ka ọ na-atọ ụtọ, mana ndị bi na mpaghara ndị a na-eme ndụ ha kwa ụbọchị dị ka ebe ọ bụla ọzọ. O kwesịrị ime ka anyị dị umeala n’obi.
Gee ntị UGBUA
Mwepụta kacha ọhụrụ
Ọwụwa Anyanwụ Ezumike
Jun 9, 2022 | Horst Grabosch - ndetu mwepụta, Ihe edeturu ntọhapụ
Nke a bụ isi ihe nke afọ gị. Nchegbu niile anọwo n'ụlọ. Mmiri dị n'ọdọ mmiri nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ gị na-egbuke egbuke n'ụtụtụ ụtụtụ. Ọ ga-abụ ọmarịcha ụbọchị.
Jun 7, 2022 | Horst Grabosch - ndetu mwepụta, Ihe edeturu ntọhapụ
Anyị nọ n'otu ebe na South America. Ndị mmadụ na-agbakọta ọnụ maka oriri ubi nwere mmanya mmanya na ịgba egwu. A na-echefu nchegbu niile maka otu mgbede.
Apr 29, 2022 | Horst Grabosch - ndetu mwepụta, Ihe edeturu ntọhapụ
Cuba bụ mba ndọrọ ndọrọ ọchịchị tisasịrị, mana ndị mmadụ echekwala ugwu ha. Site n'enyemaka nke Ry Cooder, bụ onye mere ka ndị egwú ochie ahụ laghachi azụ na ọrụ ya "Buena Vista Social Club", olileanya nke ichekwa mgbọrọgwụ omenala na-adị.
Oziọma ụgbọ oloko
Apr 26, 2022 | Horst Grabosch - ndetu mwepụta, Ihe edeturu ntọhapụ
The song Oziọma Train bụghị banyere okpukpe, ma banyere transcendence. Ndị mmadụ na-achọ mkpụrụ obi na udo nke ime.
Apr 3, 2022 | Horst Grabosch - ndetu mwepụta, Ihe edeturu ntọhapụ
Ụbọchị oyi na-atụ na-akọwa mmetụta ahụ n'ụbọchị oyi doro anya ma na-ekpo ọkụ. Ọbụna ụda dị ka oyi kpọnwụrụ, mana ọ na-adị gị ka ọ dị ndụ.
Mar 25, 2022 | Horst Grabosch - ndetu mwepụta, Ihe edeturu ntọhapụ
Alụmdi na nwunye bụ akụkọ nke ọchịchọ maka idealized mma. Nwoke ahụ na-ekwupụta ịhụnanya ya, mana onye ọ hụrụ n'anya na-anọgide na-abụ akụkọ ifo na-edoghị anya.
Ntụgharị uche na egwu
Nwere ike 28, 2022 | Fanpaị
A na-eji ntụgharị uche eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi dị ka akara maka izu ike ụdịdị dị iche iche, mana ntụgharị uche karịrị ntụrụndụ.
Mar 13, 2022 | Fanpaị
Mgbe m chọsịrị ogologo oge maka ụdị ma ọ bụ okwu kwesịrị ekwesị maka mmepụta egwu m na-adịbeghị anya, achọtawo m na "eclectic" adjective kwesịrị ekwesị.
Nhọrọ n'etiti gịnị?
Mar 8, 2022 | Fanpaị
N'ezie, anyị katọrọ agha a na-alụ na Ukraine, ma olee nhọrọ anyị nwere mgbe nke ahụ gasịrị?
Chineke nke njuju
Nov 22, 2021 | Fanpaị
Nkà mmụta sayensị sayensị na ọnọdụ ime mmụọ abụghị ihe megidere. Echiche nke okike - nke Chineke - enweghị ike isi n'ihe ọ bụla pụta.
Banyere Holistic Entprima izu
Oct 5, 2021 | Fanpaị
Iji mee ka obere ụwa m dị iche iche dị nso na ndị na -ege ntị, ekepụtara m “Holistic Entprima izu ”.
Mụaka na okenye
Apr 21, 2021 | Fanpaị
A na-akpọkwa esemokwu dị n'etiti ndị na-eto eto na ndị okenye esemokwu nke ọgbọ. Ma gịnị kpatara ha ji dịrị? Ka anyị lee ya anya. Nke mbụ, ka anyị cheta ụdị ndụ dị iche iche.
Ozi Si Na Nhazi Anyị
"Development adịghị akwụsị!" Mgbe anyị malitere Entprima, enwere otu akpọrọ Entprima Live enweghị ndekọ ọ bụla mana ọtụtụ ihe omume ndụ. Nwere ike ịgbaso ụzọ otu a na weebụsaịtị nke ha> Entprima Live
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ọrụ ndekọ ndekọ na nde egwuregwu na ihe na-esiwanye mgbagwoju anya. M na-agbalị ike m inye gị nkọwa na ime ka ị mara.
Editọ na Chief
Jikọọ na anyị ma denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị. Usoro akụkọ anyị na-adị agafeghị oke na adịghị akpasu iwe.
Daalụ na Nnọọ!
Ekwenyere m ịnata Entprima akwukwo ozi banyere "Entprima - Egwu & karịa "kwa ọnwa site n'aka anyị amụma nzuzo
Rịba ama saịtị
Anyị na-eji kuki anyị na webụsaịtị anyị. Themfọdụ n’ime ha dị mkpa, ebe ndị ọzọ na-enyere anyị aka imeziwanye weebụsaịtị a na ahụmịhe gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru afọ 16 ma chọọ inye nkwenye maka ọrụ nhọrọ, ị ga-arịọrịrị ndị nlekọta iwu maka ikike. Anyị na-eji kuki na teknụzụ ndị ọzọ na webụsaịtị anyị. Ụfọdụ n'ime ha dị mkpa, ebe ndị ọzọ na-enyere anyị aka imeziwanye webụsaịtị a na ahụmịhe gị. Enwere ike ịhazi data nkeonwe (dịka ọmụmaatụ adreesị IP), dịka ọmụmaatụ maka mgbasa ozi ahaziri iche na ọdịnaya ma ọ bụ mgbasa ozi na nha ọdịnaya. Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara iji data gị na anyị amụma nzuzo. Ị nwere ike ịkagbu ma ọ bụ gbanwee nhọrọ gị n'oge ọ bụla n'okpuru Settings.
Nabata ha niile
Mmasị Nzuzo Onwe Onye
Nkọwa kuki amụma nzuzo Akara
Ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru afọ 16 ma chọọ inye nkwenye maka ọrụ nhọrọ, ị ga-arịọrịrị ndị nlekọta iwu maka ikike. Anyị na-eji kuki na teknụzụ ndị ọzọ na webụsaịtị anyị. Ụfọdụ n'ime ha dị mkpa, ebe ndị ọzọ na-enyere anyị aka imeziwanye webụsaịtị a na ahụmịhe gị. Enwere ike ịhazi data nkeonwe (dịka ọmụmaatụ adreesị IP), dịka ọmụmaatụ maka mgbasa ozi ahaziri iche na ọdịnaya ma ọ bụ mgbasa ozi na nha ọdịnaya. Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara iji data gị na anyị amụma nzuzo. N'ebe a, ị ga - ahụ nyocha nke kuki niile eji. You nwere ike inye nkwenye gị gbasara edemede niile ma ọ bụ gosipụta ozi ndị ọzọ wee họrọ ụfọdụ kuki.
Nabata ha niile Save
Kuki dị mkpa na-enyere ọrụ ndị bụ isi aka ma ọ dị mkpa maka ọrụ kwesịrị ekwesị nke weebụsaịtị.
Gosi Ozi Kuki Zoo Ozi Kuki
Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ a, Akara
Na-echekwa mmasị ndị ọbịa ahọrọ na Kuki nke Borlabs Cookie.
Ọnụ ọgụgụ (2)
Kuki ọnụ ọgụgụ na-anakọta ozi na-enweghị aha. Ozi a na-enyere anyị aka ịghọta etu ndị ọbịa anyị si eji websaịtị anyị.
Google Ireland amachaghị, Gordon, Street Street, Dublin 4, Ireland
Kuki nke Google jiri maka nyocha weebụsaịtị. Na - eweputa onodu onu ogugu banyere otu onye obia si eji weebụsaịtị.
_ga, _egwu, _gid
Kuki nke Facebook jiri maka nyocha weebụsaịtị, mgbasa ozi ezubere iche, na mmesa mgbasa ozi.
_fbp, act, c_user, datr, fr, m_pixel_ration, pl, ọnụnọ, sb, spin, wd, xs
Oge / Afọ 1
Media mpụga (7)
Ndabere sitere na nyiwe vidiyo na nyiwe mgbasa ozi nke mmekọrịta. Ọ bụrụ na anabatụrụ kuki Media mpụga, ịnweta ọdịnaya ndị ahụ anaghị achọ nkwenye akwụkwọ ntuziaka.
Ejiri iji kpughee ọdịnaya Facebook.
Ejiri iji kpughee ọdịnaya Google Maps.
Ejiri iji kpughee ọdịnaya Instagram.
Ụlọ ọrụ Opentreetmap, St John's Innovation Center, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom
Ejiri iji kpughee ọdịnaya OpenStreetMap.
Ụlọ ọrụ International Twitter, Otu Cumberland Ebe, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Ejiri iji kpughee ọdịnaya Twitter.
__idere echiche, local_storage_support_test
A na-eji emechi ọdịnaya Vimeo.
Na-eji emeghe ọdịnaya YouTube.
nke Borlabs Cookie kwadoro
amụma nzuzo Akara